Fironana ecommerce 10 ho hitanao hampiharina amin'ny 2017 | Martech Zone
Tsy ela akory izay dia tsy dia nahazo aina loatra ny mpanjifa niditra tamin'ny data-n'ny carte de crédit hividianana fividianana. Tsy natoky ny tranokala izy ireo, tsy natoky ny fivarotana, tsy natoky ny fandefasana… tsy natoky na inona na inona fotsiny izy ireo. Taona maro taty aoriana, na izany aza, ary ny mpanjifa antonony dia mihoatra ny antsasaky ny fividianan'izy ireo amin'ny Internet!
Miaraka amin'ny hetsika fividianana, fifantenana sehatra e-commerce tsy mampino, famatsiana tranokala fizarana tsy misy farany, ary sakana tsy hiditra amin'ny fidirana… ny ecommerce dia mirongatra be amin'ny fitomboana sy ny fitomboana. Raha tadidio izany dia zava-dehibe ny hamaivanina ny fomba hanavahanao ny fivarotanao amin'ny Internet.
SSL2Buy, mpamatsy SSL manerantany, dia namorona fironana eCommerce folo hijerena amin'ny taona 2017 namboarina tao amin'ity sary mahafinaritra ity:
Ny faran'ny zoma mainty sy ny alatsinain'ny cyber - satria tsy mila mandao ny fandrianao ianao ary miady an-tsipika, mampihena ny fiantraikan'ireny andro fivarotana ireny ny ecommerce ary mihanaka hatramin'ny iray volana ny fitondran-tena mividy. Novambra Cyber.
Fanandramana manokana momba ny fiantsenana manokana sy bebe kokoa - Ny sehatra izay manara-maso ny fanapahan-kevitry ny fividianana sy ny fitondran-tenany dia marina ihany ary afaka manampy ny fivarotana an-tserasera hanome fitondran-tena manokana izay mampihena ny fikorontanan'ny mividy ary manome tolo-kevitra momba ny vokatra tadiavin'ny mpividy.
Ireo mpanjifa dia hifandray amin'ny Artigence Intelligence - Ny chatbots, ny famandrihana ary ny serivisy ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia hamaly amin'ny fomba marina sy mahomby ireo fanontaniana momba ny fiantsenana an-tserasera, hanatsara ny traikefa amin'ny ecommerce, hisarika ny mpampiasa ary hampiakatra azy ireo hampitombo ny lanjan'ireo sarety fiantsenana ary hampihena ny fandaozana.
Maminany mialoha ny fividianan'ny mpanjifa manaraka - Ny fahaizana manangona sy mamakafaka angon-drakitra lehibe dia manome maodely forecasting mialoha sy vinavina tena marina izay ampiasaina hametrahana tolotra eo imason'ny mpanjifa amin'ny fotoana ilàn'izy ireo izany.
Ataovy tsara araka izay azo atao ny traikefa finday - Ny finday dia nihoatra ny birao ho an'ireo mpiantsena an-tserasera mizaha sy manadihady ny fanapahan-kevitry ny vokatra manaraka. Google dia manome index tsy manam-paharoa ho an'ny finday mitaky ny handehanan'ireo orinasa fomba finday voalohany hanatsarana ny tranonkalany e-varotra.
Fampitomboana ny fitaterana amin'ny andro mitovy - 29% amin'ireo mpanjifa no nanambara fa handoa vola fanampiny amin'ny fandefasana amin'ny andro ihany. Tsy mahagaga raha naninona ireo mpitondra toa an'i Amazon no nitondra ny serivisy ho amin'ny tsena, ary nihanaloka ny filan'ny fitsidihana ny toeram-pivarotana akaiky indrindra.
Fivarotana sosialy - 70% ny mpanjifa no voataonan'ireo tolo-kevitra momba ny marika sy ny vokatra ao amin'ny media sosialy Ny fidirana amin'ny media sosialy ho fampitomboana ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika sy ny fisoloana vava dia mitarika fivarotana ankehitriny, mandrisika ireo mpivarotra hamolavola paikady ara-tsosialy omni-fantsona be pitsiny.
HTTPS ilaina amin'ny taona 2017 - Raha tsy misy fifandraisana SSL, ny mpanjifa sy ny mpamatsy ecommerce dia mora iharan'ny fangalarana angon-drakitra na fanapahana ny rafitra. Google dia efa nanamafy fa nampidirina amina algorithman laharana i SSL, tonga ny fotoana hiarovana ny tranokala rehetra anananao izay angonina na ampitaina ny angona.
Fivarotana omni-fantsona - Ireo mpividy multichannel dia mandany mihoatra ny in-3 mihoatra ny mpiantsena amin'ny takelaka tokana mitaky ny hanaovana mpivarotra fanentanana sarotra hanarahana ireo mpividy mety hitarika azy ireo hividy na ao amin'ny magazay, finday, na aiza na aiza eo anelanelany.
Famerenana marika momba ny vokatra - Amin'ny salan'isa, mitaky teboka fito alohan'ny ahafahanao mitarika mpividy hiverina ny teti-dratsy dia tetikady tena ilaina ho an'ny mpivarotra ecommerce rehetra.
Hamarino tsara fa mandinika ireo fironana manan-danja ireo eo am-pamoronana ny tetikady marketing ecommerce ho an'ny 2017.
Tags: fahaizana artifisialylehibeblack fridaycyber mondayfanateranafiantsenana mavitrikainfographic ecommercefironana ecommerceny httpsSary torohayfiantsenana findayecommerce omnichannelfivarotana omnichannelremarketingfanaterana tamin'io andro io ihanyscommercefivarotana sosialyFandefasanafiantsenanatraikefa fiantsenanavarotra sosialyecommerce ara-tsosialyfivarotana ara-tsosialySSL
Fironana 10 ho an'ny mpanjifa amin'ny taona 2017… Miaraka amin'ny fampitandremana!